Incazelo yokulala lapho unakekela khona izipikili zakho: ukuzisika wena noma omunye umuntu, ukuphula izipikili
Incazelo yokulala lapho unakekela khona izipikili zakho, usike noma udwebe.
Ukuphupha izipikili ephusheni ukubona ukubonakala kwezempilo, amathuba, isikhundla phakathi kwabantu. Ukuze uthole incazelo enembile, umuntu kufanele aqaphele imininingwane, imicimbi, imizwelo ngaphansi kokuhlolwa.
Kungani uphupha, unquma kanjani izipikili zakho?
Ngokusho kwencazelo evelele kakhulu yencwadi yephupho, lokhu kusho "ukusika" amanye amacala, ngokuvamile okudinga ukushesha. Kodwa kungase kusho ukuthi umuntu uzinakekela kakhulu ukubukeka nesimo emehlweni abanye. Futhi ngezinye izikhathi isilwane esikuphusheni singanqunywa umuntu onenkinga enkulu. Uma umuntu ebona lokhu, kuzodingeka axazulule izinkinga eyedwa, kuye ngamandla akhe.
Futhi ukubona ukuthi izipikili zinquma kanjani omunye umuntu kusho ukuthi umuntu kufanele afunde emaphutheni abanye abantu ukuze agweme ubunzima esikhathini esizayo. Mhlawumbe, nguyena owaba yiqhawe lombono wakho ebusuku, uzokusiza ukuba uthole ulwazi oludingekayo lokuphila.
Ukulungisa izipikili zakho ngephupho - ukuzama ukuqeda into engafanele, isibonelo, ezinkingeni ezingadingekile. Ingqondo engaqondakali njengokungathi iluleka isikhathi esithile ukuba uziphendulele ukuqonda okufanele ukuguqulwa.
Ukusika izipikili emilenzeni kungasho ukunyakaza okungafuneki, kokubili ngokoqobo "ngezinyawo" nangokomfanekiso (ukuguquka endleleni). Kulesi simo, uma isikhathi eside, ulinde isikhathi eside. Futhi uma unciphisa izipikili emlenzeni komunye umuntu, cabanga ngakho, mhlawumbe umsebenzi wakho ubiza okungaphezu kokuthola kwakho. Futhi umuntu osika izipikili zakhe emilenzeni yakho, uzokwenza kube lula kuwe ukuthi usebenze. Ukunciphisa i-marigold kumntwana - ezinkingeni nasekukhathaleleni.
Abaphuphile bathi izipikili ezide zithembisa ubunzima obufanayo obude, isikhathi eside sokuzikhukhumeza, futhi eside kakhulu ezinkingeni zemali, ithemba elingenakwenzeka. Kodwa okusheshayo kusho indlela esheshayo yokuxabana nokuxabana, ngokuvamile okubangelwa ukunganaki ebhizinisini. Uma owesifazane ephupha, ukuthi usika izipikili zakhe, lokhu kuyisibonakaliso sokuthenga okubizayo esizayo.
Izipikili eziphulayo zingaba isignali - ukuze udumale futhi ezindabeni ezikhulelwe. Kodwa-ke, ngezinye izikhathi kuyisibonakaliso esihle, okusho ukulwa nokuhlupheka, okungaletha imiphumela emihle. Futhi ukubona izipikili eziphukile ezivela kwabanye abantu uthembisa ubunzima bokuxhumana kuphela. Ukuze kuchazwe ubuthongo, impela isimo se-manicure kubalulekile. Uma kungcolile futhi kungenangqondo, kufanelekile ukucabanga ngenhlebo, ukuhleba nokunye amagama. Ukuzizwa unamahloni ngenxa yezandla ezingakhethi kahle kusho imizwa efanayo kanye nomuntu emndenini.
Uma izipikili zivulekile, lokhu kubonisa ukukhathazeka ngenxa yokuphikisana. Kodwa uma zibukeka zihle futhi zijabulisa, khona-ke lokhu kuyisimangaliso esimemezela ukuthi uhlala uthanda nomuntu othandekayo. Izipikili ezide kahle, ngokusho kwencwadi yokuphupha yekhulu lama-XXI - ukuthola ifa.
Ukuphula isilwane ephusheni ukubikezela ushintsho ebuhlotsheni. Ngokusho kwencwadi yephupho likaMiller, i-nail ephukile iyisignesha engavumelekile, i-harbinger yehlazo okufanele igwenywe, noma ubunzima bezezimali okufanele buvimbele.
Ukuzibamba ngephupho lamarigolds kuyisibonakaliso sokukhungatheka kumuntu.
Ukupenda izipikili kuyisimangaliso esihle; Amaphupho anjalo aphushulwa kubantu abasendleleni eya empilweni yokuchuma okuhle nokugcwele. Umbala ubalulekile futhi: ngakho-ke, obomvu kuhlale kunomzimba. Kumuntu othile usesho loseshilo, futhi kumuntu - ukulwa nesilingo. Izinzipho ezimnyama zihlanganisa imicabango emnyama. Kufanelekile ukuthatha ingqondo yakho imizwa emibi ukuze ujabulele ukuphila.
Ukunakekela izipikili ephusheni ukuletha umyalo empilweni yakho. Iphupho elinjalo ngokuvamile lisho ukuthi intombazane ilungele ukuqala umndeni wayo.
Kusukela empilweni yangempela imithi idlala indima ebalulekile ekwenzeni umqondo jikelele womuntu. Ngakho-ke, qiniseka ukucabangela imizwelo yakho kanye nemininingwane ejwayelekile yokulala lapho uke wakha khona noma ulungisa izipikili zakho.
Amapancake nge-saumoni ebhemayo
I-Vaginismus yisifo socansi besifazane
10 "akakwazi" kubazali ekukhuliseni ingane
Isaladi "Ukujula kolwandle"
Ukugcoba nge-goose giblets
I-recipe ye-mullet ngaphansi kwe-imayonnaise
Yini ongayinika emshadweni we-agate?
Izakhiwo eziphikisayo ze-barberry
Izingane zingaphila nezilwane ezifuywayo